Wararkii ugu danbeeyay Doorashada | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wararkii ugu danbeeyay Doorashada
Wakiilada Beesha caalamka ayaa wada dadaalo cusub oo ay dib markale ay miiska wada hadalka ugu soo celin lahaayeen dhinacyada Soomaalida ee shalay shirka ku kala booday.
Safiirada Beesha Caalamka ayaa xalay usheegay inaysan Muqdiaho kabixi karin ilaa xal laga gaaro wadahadalada doorashada.
kalankan ay laqaateen madaxda maamulada qaar sida Lafta gareen, Qoorqoor iyo Cali guudlaawe.
Galabtana waxay saaxiibada Caalamku lakulmeen Axmad madoobe iyo Dani, wadahadalkan ayay kaga hdleen labada madaxweyne inaysan ogayn shir faahilmay balse dhankooda ay wali diyaar uyihiin wadahadalada, iyagoo ku eedeeyay M. Farmaajo inuusan doonayn in doorasho loo dhan yahay uu dalka aado.
Maalinta sabtida ayaa lafilayaa wakiilada beesha caalamka inay lakulmaan Farmaajo si shirka dib la isugu soo laabto.
Warar aan ka helnay Xalane ayaa sheegaya in shirka uu dib ufurmi doono Todobaadka soo socda iyadoo dhinacyada loo gudbin doono fariimo ka culus kuwii hore oo ah in talaabo deg deg ah laga qaadi doono Cidii ay ku cadaato inay hor taagan tahay Hanaanka doorashada dalka inuu ku qabsoomo si nabadgelyo ah.
Waxaa lafilayaa Maalmaha soo socda in Golaha Amaanka uu shir deg deg ah ka yeesho arimaha Soomaaliya kadib markii uu saacadihii lasoo dhaafay Qoraal ku saabsan xaalada shirka Soomaalida usocday ay ka heleen Wakiilka Xog-haya guud ee Q.midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Inkastoo la ogyahay in dhinacyada Soomaalida inaysan gaari karin wax heshiis ah, hadana waxaa laga war sugayaa dadaalada cusub ee beesha caalamka iyo sida ay u ciqaabaan cida ay u arkaan inay carqalad ku tahay dadaalda socda.
Previous articleShacabka kenya oo aad uga soo hor jeeda Daymaha Kenya ka qaadato Hay’adda Lacagta Aduunka ee IMF
Next articleSaaxiibada Caalamku Waxay Ku Baaqeen In Wadahadalku Sii Socdaan
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo ka hor yimid mudo kordhinta dowlada. Isu’tagga Ururada Bulshada Rayidka Soomaaliya, ayaa si adag uga horyimid mudda kordhinta loo sameeyay...
Ciidamada Daraawiishta Galmudug oo Gadood sameeywy maanta
Waa kumaa Wasiirkii hore ee Arimaha dibada Dalka Itoobiya ee dhawaantaan...
WHO oo ku Talisay in Talaalka AstraZenecca loo Adeegsado Afrika
Askari madow ah oo ka tirsan militariga Mareykanka oo ...